Ny Valosoa, 13 Jolay 2017. Ravalomanana mivady, prefet, PM, Tim, P. Rabary, Gtt, Jirama… Arp Helisoa, Mcm-Tanà. | Mouvement des Citoyens Malagasy de Paris
← Marc Ravalomanana. « Fanakorontanana firenena », GValosoa, TiaTanindrazana.
« Tany tsy misy lalàna », Dadan’i Zina. →
Ny Valosoa, 13 Jolay 2017. Ravalomanana mivady, prefet, PM, Tim, P. Rabary, Gtt, Jirama… Arp Helisoa, Mcm-Tanà.
Publié le 13 juillet 2017 par Mouvement des Citoyens Malagasy de Paris
Hanatrika ny 14 jolay i Dada sy Neny
Hankalazaina rahampitso 14 jolay ny fetim-pirenena Frantsay, tsy any Frantsa ihany no misy fankalazana rahampitso fa saika amin’ireo tany misy Masoivohon’i Frantsa manerana izao tontolo izao dia hisy fankalazana avokoa. Tsy diso anjara amin’izany ny eto Madagasikara, manasa ireo teratany Frantsay monina sy miasa eto Madagasikara ny Ambasady, manasa ireo tompon’andraiki-panjkakana isan-tsokajiny, ireo mpanao politika, ny mpandraharaha ara-toekarena.
Toy ny isan-taona, hatramin’ny naha-tafaverina azy eto Madagasikara indray, miatrika izany hatrany ny filoha nasionalin’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM) Marc Ravalomanana sy ny ben’ny tanànan’Antananarivo Renivohitra, Lalao Ravalomanana. Anisan’ireo voaasa ary hanatrika izany fanamarihana izany eny amin’ny Masoivohon’i Frantsa eny Ivandry rahampitso ny filoha mpanorina ny antoko TIM sy ny ben’ny tanànan’Antananarivo Renivohitra.
Azo lazaina ho mifanatona tato ho ato i Dada sy Neny sy ny Frantsay, nihaona tamin’ny fiandohan’ity herinandro ity ny Amnasadaoron’i Frantsa eto amintsika, Véronique Vouland, sy ny filoha nasionalin’ny antoko TIM, Marc Ravalomanana, tsy nisy nipika ny dinika tamin’izany. Niatrika ny fihaonamben’ireo ben’ny tanàna miteny Frantsay eran-tany tany Montreal Kanada koa ny volana jona lasa teo i Dada sy i Neny, ary nisy ny fitarainana nataon’izy ireo amin’ny OIF momba ny antsojay ataon’ny fitondram-panjakana amin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra sy ny antoko TIM. Misokatra amin’ny lafy valon’izao tontolo izao sy ny vahiny rehetra hatrany no politikan’ny Kaominina Antananarivco Renivohitra sy ny antoko TIM, ka tsy mahagaga raha hiatrika ny fetin’ny Frantsay koa izy ireo.
Fitondran’ny mpanao didin’ny be sandry no misy eto
Tsy misy antenaina amin’ity fitondrana ity. Nandritra ny fitondrana nentin’ny filoha Hery Rajaonarimampianina dia tsy hita izay zavatra vita mivaingana fa dia tip- top hoy ny fiteny izay ary famonoana afo fotsiny fa tsy misy ny vahaolana maharitra ialana amin’ny fahasahiranana mahazo ny firenena.
Ny malaza ankehitriny izao dia tsy misy afatsy ny fanaovana didin’ny be sandry, tsy misy ny tany tan-dalàna izay dradradradraina isak’izay mikabary eo imason’ny vahoaka sy ny fanajana ny zon’olombelona izay vao namoahan’ny amnesty international any Genève filazana fa tsy misy fanajana ny zon’olombelona eto Madagasikara. Ohatra amin’izany ny raharaha Antsakabary. Tsy an-drenivohitra tsy ambanivohitra fa dia mampiasa ny fahefana eo am-pelatanany ny mpitondra.
Any amin’ny distrikan’i Soanieran’Ivongo izao dia tadiavina hoesorina ho soloina HVM ny ben’ny tanàna tsy miankina any antoerana efa niasa 1 taona sy tapany. Mbola tsy ampy ny halabato be vata nataon’ny filoha Hery Rajaonarimampianina fa dia alaina koa ny fahefana eo am-pelatanan’ny hafa omena ny antokon’ny fitondrana. Tsy tsapan’ity fitondrana ity mihintsy ve nanomboka ny sabotsy teo ny mba hanova fihetsika e! vao mainka indray aza nampiasaina daholo indray ireo gazety mpiray tendro amin’ny fitondrana voakarama mandefa ny dokambarotra fotoambita manaratsy ny filoha Marc Ravalomana.
Ny mpanao politika milaza mpanohitra ny HVM toa an-dry Lalatiana Ravololomanana omena toerana lehibe amin’ny gazety satria manaratsy an-dRavalomanana. Ny tsy fatatry ny fitondrana anie dia basy itifirany ny tenany ihany ny vaovao alefan’izy ireo hanaratsiana iny dadan’ny sasany iny e! volamena milatsaka anjorony izy ka tsy avelan’ny soa tsy hamiratra.
Mikatso koa ny fitsarana any Faradofay
Nampiato ny asany koa ho fanehoana firaisankina amin’ny SMM foibe ireo mpitsara ao amin’ny Fitsarana Ambaratonga voalohany any Faradofay. Migrevy tsy miasa ny sendikan’ny mpitsara malagasy any Fort Dauphin. Banderoly misy sora-bavety eo amin’ny vavahadin’ny fitsarana ambaratonga voalohany. Izany dia mba hanehoana ny firaisankina eo amin’ny SMM foibe noho ny antony maro. Miankina amin’ny ministra mpiahy sy ny fitondrana malagasy ny mety hahamafy ny fitokonana. Na eo aza izany, ny foibe manana ny fijeriny sy tompon’ny teny farany amin’ity hetsika sendikaly ity hoy ireo mpikambana ao amin’ny SMM Fort-Dauphin ireo. Amin’ny ankapobeny mbola mikatso ny fitsarana any Fort- Dauphin .Marihina fa miakatra toeram-piasana ireo mpitsara ireo fa tsy miditra birao.
Faha-15 taonan’ny TIM
Saro-tahotra ny HVM, tsy mahatanty demokrasia
Totoafo ny fanehoan-kevitra fitsikerana ny fitondrana any an-drenivohitra Anôsy manoloana ny politika maloto ataon’ny fitondrana HVM. Raisina ho ohatra amizan’izany ireo tsy fanarahan-dalàna zavotany, ny fanodinkodinana ny harem-pirenena, ny vavabe maloto miaro ompa sy teny ratsy tsy faseho masoandro,… vitan’ilay ramatoa mihevitra ny tenany tsy ho tratry ny aloka. Vao mainka nanampy trotraka izany ny fanapahan-kevitra noraisin’ ny préfet de police Antananarivo manome tsy mahafoy: manao omeko tsy omeko ny fanomezana alalana ny hetsika nataon’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM) ny 8 Jolay teo. Tampotampoka teo nivoaka ny fandrarana ny hetsika. Ny Tim nilaza fa vonona hikajy ny filaminana. Tany Toliara nanao ny nataony tsy nisy nanelingelina ny HVM. Tsy fahatantesana demokrasia sy fahatahorana fifanandrianana politika no mameno ny lohan’ny HVM. Raisin’ireo mpaneho hevitra ho fitondraam-borontsiloza no misy eto. Mahakasika ity fanamarihana ny faha-15 taona nijoroan’ny TIM ity, nandray anjara tamin’izany avokoa ireo solontena avy amin’ny Faritanin’i Toliara teo aloha. Ho an’ny ankamaroan’ny olona any Faradofay, manoro vilany an’ingahy Rajaonarimampianina filoha ireo manodidina azy.
Ny Emmo-Reg, i Préfet , Praiminisitra no mila handraisana fepetra
Tsy tantin’ny mpitondra fanjakàna HVM mihintsy ny zavatra niseho nahatonga tsy sazoka ireo vahoaka mpanohana ny filoha Marc Ravalomanana hidina eny andalambe rehefa tsy navelan’ny prefektoran’Antananarivo tsy hiditra ao Mahamasina izy ireo hankalaza ny fety faha- 15 taona ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM) . Rehefa nivory ny Filankevitry ny minisitra dia nanambara ny Praiminisitra Mahafaly Olivier fa handray fepetra hentitra ho an’ireo mpitarika sy mpanome baiko ireo mpanakorontana. Notononiny manokana tamin’izany ny minisitera 3 mikasika ny fiarovampirenena mba handray ny andraikiny amin’izany .
Raha ny lojika tamin’iny sabotsy fankalazàna ny faha- 15 taona ny antoko Tiako i Madagasikara iny no asiana resaka eto dia tokony ho ny mpitandro filaminana EMMO-REG sy ny Préfet de Police ary ny Praiminisitra mihintsy no tokony handraisana fepetra eto satria izy ireo no hitan’ny maro fa nahatonga ny lazainareo mpitondra fa fanakorontanana firenena niseho tamin’iny hetsika am-pilaminana nataon’ny TIM iny . Fa iza moa no nanome fahazoan-dalana malalaka tsy nisy fepetra ny antoko TIAKO i MADAGASIKARA tamin’ny datin’ny 30 jona hanaovany fety ao Mahamasina ny sabotsy 8 jolay teo ? tsy ny prefektoran’Antananarivo izay eo ambany fahefan’ny Praiminisitra Solonandrasana Olivier ve ? ary iza indray no nanafoana ny fahazoandalana andro vitsy taty aoriana ? tsy ny préfe–n’Antananarivo ihany ve? Rehefa izay aza ny zavatra niseho dia tsy nanaiky mora ny TIM satria efa maro loatra ny fanomanana natao toy ny dokambarotra , ny artista hanafàna ny lanonana sns… izay efa nandaniana vola be , ka lasa nitory tany amin’ny tribonaly miady amin’ny fanjakàna izy ireo .
Nivoaka mpandresy tamin’ny ady natao ny TIM ka nitondra izany tany amin’ireo tompon’andraikitra rehetra tokony hampahafatarina ny didy . Kanjo inona no niseho ? tsy te-hahalala ny didin’ny tribonaly ny préfet , fa vao mainka aza namoaka fanambaràna ity farany fa tsy azo anaovana fety eto Antananarivo renivohitra manomboka ny 7 , 8 ary 9 jolay. Ny EMOREG ihany koa tsy te hahalala ny didin’ny tribonaly fa rehefa ny prefektora hono no nanome baiko azy ireo dia izay izy ireo vao hiala ao Mahamasina .
Fanampin’izany, nilaza ny mpitandro filaminana fa hanentana isampokotany izy ireo mba tsy ho tonga eny Mahamasina ny vahoaka fa tsy misy antony tokony hahatongavana any hono satria tsy nahazo alalana ny antoko TIM. Nampitombo ny fahatezeran’ny vahoaka izany rehetra izany , ka vao mainka nirodorodo ohatra ireny tantely vaky ireny izy ireo nidina teny amin’ny araben’Antananarivo . Ka eto dia mipetraka ny fanontaniana , tsy ianareo mpitondra ve no tena mampikorontana ny firenena eto e? raha tsy nanome tsifoifoy nareo dia nilamina tsara ny zavatra rehetra fa tsy nisy nidina an-dalambe naneho ny hatezerany ny vahoaka .
Ka iza eto no handraisana fepetra henjana ? valiny: ny Emmo-Reg , Préfet ary ny Praiminisitra satria izy ireo no niavian’ny fanafintohinana , ka aza mba manilika any amin’ny hafa ny tsy fahaizanareo miaina e!
Ny fanjakana no mpanakorontana eto hoy Ralipo
Nandritry ny fanehoan-kevitr’i Rakotomamonjy Philippe, na Ralipo, mpahay toekarena sady mpanao pôlitika ihany koa, fa ny fanjakana mihitsy no mpanakorontana eto. Nahoana no omeko tsy omeko hoy izy, ka omena alàlana, dia avy eo indray tsoahina? Tsy vitan’izany hoy izy, fa mampiady vahoaka mihitsy satria voakorontana hatramin’ny sain’ny olona mihitsy. Efa namoaka didy ny fitsarana miady amin’ny fanjakana, fa é!e!, ny azy ihany no marina satria matahotra an-dRavalo.
Milaza fa afaka mifanakalo hevitra ny fanjakana hoy izy, nefa izy no tena mpanakorontana sy mila ady fotsiny izao. Tsy vitan’izany hoy izy fa mbola amporisihana koa ny mpamadika palitao toa an’i Olivier Rakotovazaha hiady amin’ny olon’ny Tim. Tsy izy ihany fa ireo olona mpamadika palitao toa an-dry Faberger ihany koa dia mody ampitenenina daholo sitrany ahay handoto rano ny Tim.
Lazaina ihany koa fa nanentana olona Ravalo hoy Rakotomamonjy Philippe, nefa ny vahoaka mihitsy no efa leon’ny kobaka am-bava sy ny lainga tsara lahatry ny mpitondra HVM mpampiesona. Angaha moa afaka hanidina miainga eny amin’ny Carlton Ravalo hoy ity mpandraharaha ity ka tsy handalo ho hitan’ny olona eny an-dàlana dia lazaina fa mitarika vahoaka hikomy.
Na izany na tsy izany anefa hoy ity mpanao pôlitika ity, dia tsy maintsy mandresy Ravalo amin’ny fifidianana filoham-pirenena, ary vonona ny vahoaka hifidy azy satria latsaka lalina loatra ny fahantran’ny vahoaka malagasy ankehitriny.
Rakotoamboa Jean Louis, filoha nasionalin’ny antoko Teza.
Lalàna adaladala no nampiharin’ny Préfet de Police
Naneho ny heviny mahakasika ny raharaham-pirenena, indrindra ny hetsika fankalazana ny faha-15 taonan’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM), ny filoha nasionalin’ny antoko Teza, Rakotoamboa Jean Louis, sy ny tsy nanomezan’ny fitondrana alalana indray izany hetsika tokony ho natao tetsy Mahamasina izany, na efa nanome alalana aza ny préfet de police ny 30 jona lasa teo.
Lalàna efa tamin’ny taona 1982 no nampiharin’ny préfet de police nandrara indray iny hetsiky ny TIM iny hoy ny filoha nasionalin’ny antoko Teza, lalàna somary adaladala ihany izany hoy izy nanazava satria efa lalàna tsy mety intsony, tsy mifanaraka amin’ny zava-misy amin’izao fotoana sy ny fampanjakana ny demokrasia. Momba ny olana toy ireny tamin’ny sabotsy 8 jolay ireny, manolotra soso-kevitra ny Teza, ny fototry ny demokrasia eto amintsika mihitsy hoy izy no mila hamboarina satria ny fidinana an-dalambe dia zo fototra ho an’ny olom-pirenena rehetra fa mila miteny amin’ny mpitandro ny filaminana fotsiny izay manao hetsika, hitandro ny filaminana mandritra izany hetsika izany, izany hoe hanara-maso izay mihoa-pefy.
Tao anatin’ny 1 volana
Ben’ny tanàna TIM 3 maty, heloka bevava politika hoy ny GTT
Manoloana ny fanafihana sy famonoan’ny sasany ben’ny tanàna avy amin’ny antoko Tiako I Madagasikara (TIM) miisa 3 tato anatin”ny 1 volana izao dia milaza ny GTT Iraisam-pirenena any Genève fa mamofompofona heloka bevava politika izany, izany hoe heloka bevava niniana natao noho ny antony politika maloto. Ireo ben’ny tanàna TIM 3 nisy namono ireo dia ny ben’ny tanàna tany Bemokotra Maevatanana, ny ben’ny tanànan’Ambalakindresy Ambohimahasoa ary ny farany tamin’ity herinandro ity dia ny ben’ny tanànan’Ampefy Miarinarivo Itasy. Milaza ny GTT Iraisam-pirenena fa niniana novonoina izy ireo fa nosarontsaronana fanafihan-jiolahy satria tsy nety nivadika tamin’ny antoko misy azy dia ny TIM, amin’izao ankatoky ny fifidianana ho avy izao. Ny hetsika nataon’ny TIM nahavory olona marobe ny sabotsy lasa teo ihany koa hoy ny GTT Iraisam-pirenena dia maneho ny efa tsy fankasitrahan’ny vahoaka intsony ny fitondrana HVM izay anjakan’ny kolikoly, tsy mahavaha ny olam-bahoaka.
3 maires Tim tués en 1 mois
Une forte odeur d’assassinat politique
A ce stade, on ne peut plus se contenter de « classiques » crimes de droit commun consécutifs à l’insécurité, endémique soit-elle dans le pays.
En effet, les trois maires assassinés étaient tous issus de la formation TIM, à savoir :
– le maire de Bemikotry (district de Maevatanana),
– le maire d’Ambalakindresy (district d’Ambohimahasoa),
– le maire d’Ampefy.
C’est quand même étrange comme coïncidence. Le soupçon porte donc sur des assassinats ciblés de personnalités politiques de l’opposition (TIM en particulier) qui auraient refusé de trahir leur camp pour basculer dans « l’autre » en vue des futures élections.
Après les intimidations, les menaces et la corruption sous toutes ses formes, cette pratique est familière des régimes totalitaires aux abois qui sont rejetés par leur population.
C’est le cas du régime HVM qui vient de subir, samedi dernier, une sacrée humiliation avec la démonstration de force du camp Ravalomanana, preuve indiscutable d’un ras-le-bol populaire contre un pouvoir corrompu et mafieux.
GTT International – Genève
Tsy mandresy lahatra ny mpanabe maro ny fanazavana nataon`ny minisitra Paul Rabary
Ny maro tamin`ny mpanabe dia nahamarika fa tena ratsy tanteraka ny
voka-panadinana CEPE tamin`ity 2017 ity . Ny minisiteran`ny
fanabeazana anefa dia namoaka tarehimarika fa nitombo teo amin`ny 3 % izany ary nirehareha ery ry zareo tompon`andraikitra fa
vokatry ny fampiofanana nisesy no nahatonga ny fihatsaran`ny vokatra , hono. Mbola tsy nivoaka ny vokatra ofisialin`ny BEPC dia may ny endim-boanjon`Ingahy Paul Rabary ka efa nanatsidika sahady tamin`ny talata teo fa latsaky ny 50% indray ny taham-pahafaham-panadinana tamin`ireo vokatra tsy ofisialy, izany hoe tena ho ratsy indray ny voka-panadinana BEPC ary tsy afaka hanafina na hanarontsarona izany intsony ny minisiteran`ny fampianarana . Dia nanamarin-tena sahady Ingahy minisitra fa aleo ny mahay ihany, hono, no ho afaka toy izay be tsy andraofana . Fa angaha moa rehefa vitsy ny afa-panadinana dia midika fa ny mahay daholo ireo afaka ireo? Efa niaraha-nahita hatramin`ny taona 2016 anie fa nisy ny bonus na fanampin`isa nomena fotsiny ny mpiadina satria fanontaniana tsy mandeha amin`izay izy na ivelan`ny programa no napetraka tamin`ny mpiadina e ! Ka raha afaka vokatr`izany fanampin`isa nomem-potsiny izany ve ny mpiadina dia midika fa tena mahay ?
Mamoaka sy mampiditra ary miala bala fotsiny ny minisitra hoy ny mpanabe maro fa tsy mandresy lahatra mihitsy ny fanazavany .Nilaza ihany koa ny minisitra fa rehefa mpampianatra dia mitovy daholo . Toherin`ny mpampianatra maro izany . Misy ny efa tamin`ny folo taona lasa no nampianatra farany ary mitana birao no asany ankehitriny , hoy izy ireo.
Noho izany dia tena tsy voatery hahafantatra ny programa sy ny tena zava-misy any an-dakilasy ny mpampianatra toy izany hoy ireo tena mbola mitana kilasy sy mampianatra ankehitriny . Vao mainka moa mampimenomenona ny sekoly tsy miankina marobe ny fanovana peta-toko momba ny taon-tsekoly toy ny tsy fidirana raha tsy volana oktobra , ny fanadinana CEPE izay nahemotra ho ny 31 jolay 2018 raha taty amin`ny jona izany tamin`ity 2017 ity . Ary dia hihemotra iray volana toy izany koa ny BEPC sy BACC 2018 vokatr`io fanovana kitoatoa io. Dia ho lasa 11 volana koa ny taon-tsekoly araka izany ho an`ireo hiatrika fanadinam-panjakana toy ny BEPC sy BACC.
Raha fehezina hoy ny mpampianatry ny sekoly tsy miankina maro , dia tena fanapotehana tanteraka ny fampianarana eto Madagasikara izao ataon`ny minisiteran`ny fampianarana izao satria toa tsy olona tena niaina teo amin`ny sehatry ny fampianarana sy tsy mpampianatra no lohandohany ao, fa olona tongatonga ho azy teo noho ny resaka politika , ka dia izao mikorontana ambony ambany izao ny tontolon`ny fampianarana ankehitriny.
Velon-taraina amin’ny Jirama indray ny vahoaka
Resabe eto Antsirabe indray ankehitriny ny fepetra raisin’ny Jirama. Nandray fepetra indray mantsy ny tompon’andraikitra amin’ny fanapahana ireo fitarihana jiro miainga avy amin’ny tranon’olona iray manana ireny « Compteur » ireny ka miampita amin’ny trano hafa tsy mbola manana ilay fitaovana.
Raha ny fanambarana avy amin’ireo tompon’andraikitra dia voalaza fa hisorohana ny loza mety hitranga sy hisakanana ny mety hisian’ny halatra jiro no nandraisana izany fepetra izany, izay nambara fa tafiditra ao anatin’ny fanitsiana ny fitantanana ity Orinasam-panjakana ity. Tsy ankasitrahan’ireo mponina anefa izany satria tena efa nisy ny fanapahana ireo izay hitan’ny Jirama ary mbola mitohy izany amin’izao fotoana ka nitaraina tany amin’ny Ben’ny tanàna ireo vahoaka marobe.
Nambaran’ireo mponina efa voakasika fa ny Jirama no tsy mahavita ny andraikiny amin’ny fitsinjarana ireo « Compteur », satria saika efa manana fangatahana avokoa ireo tokantrano ireo saingy tsy misy ao amin’ny Jirama Antsirabe kanefa ny olona mila jiro ka aleon’izy ireo mifanaraka amin’ny manodidina izay efa mba manana « compteur » ka mampiasa ilay antsoina hoe : « sous-compteur » ka samy mandoa izay lanininy ny mampiasa izany. Tsy eken’ny Jirama anefa izany fa lazain’izy ireo fa tokony hiandry ny fitsinjarana ny fahatongavan’ireo fitaovana ny olona fa tsy mahazo mitaritarika jiro intsony ka efa nisy ny « opération » nanesorana ireo izay tratran’izy ireo mitarika jiro.
Nambaran’ny ben’ny tanàna Paul Razanakolona fa tsy avy amin’ny mponina no mahatonga azy ireo hitarika jiro io fa avy amin’ny Jirama ka niangavy ny Jirama mba hampitsahatra izao hetsika izao ny tenany mba hitandroana ny mety hisian’ny korontana. Namafisin’ny ben’ny tanàna mantsy fa karazana fanakorontanana ny fiaraha-monina no ataon’ny Jirama satria tsy mbola misy ny fitaovana ao aminy ary ny filàna anefa efa be dia be ka ahiana tsy aharaka izany akory ny tolotra omenin’ity orinasa ity kanefa dia ny fanapahana jiro no mahamaika azy. Etsy andaniny koa dia tsy mangalatra jiro ireo olona ireo fa ny « compteur » efa misy amin’ireo olona mifanaraka aminy no ampiasaina sy handoavan’izy ireo ny faktiora. Isan’ny olana nambaran’ny ben’ny tanàna ihany koa ny mety hanararaotan’ny olona ny tsy fandriampahalemana satria saika ireo tanàna vaovao vao miorina avokoa ireto misarika jiro ireto ka hiteraka olana izany.
Nanamafy ny Ben’ny tanàna fa efa nisy ny fifampiresahany tamin’ny tompon’andraikitry ny Jirama manoloana ity resaka ity ka ho hita eo ny fepetra ho raisin’izy ireo momba izany. Etsy andaniny dia miely ny resaka fa isan’ny hararaotan’ny tompon’andraikitra sasany ao amin’ny Jirama hanaovana kolikoly ity resaka « compteur » ity manerana an’i Madagasikara ka izany no mampanahy ny mponina satria tsy milahatra araka ny fangatahana ny famoahana izany fa arakarak’izay manam-bola sy mahatolotolotra ihany. Asa moa raha mba fantatry ny tompon’andraikitra izany na tsia.
Pr Harimalala Joseph
Tokony hifandamina sy hifampiresaka ny TIM sy ny HVM
Mbola resabe eran’i Madagasikara hatrany ivelany hatrany ilay fankalazana ny faha-15 taoan’ny Antoko TIM natao ny Sabotsy 8 jolay lasa teo iny. Nanakoako naneran-tany moa iny hetsika iny, indrindra ny fanakanan’ny fanjakana izany hetsika izany, izay vao mainka nampalaza ny antoko sy ny mpitarika izany. Ho an’i Pr Harimalala Joseph dia tsy mitsahatra ny maneho hevitra amin’ny raharaham-pirenena izay mampikorosy fahana ny fiainan’ny malagasy izany.
Miely indray mantsy ny resaka amin’izao fotoana fa ho samborina indray ny filoha Ravalomanana noho iny hetsika nataony ka tsy tanteraka iny ary mbola namafisiny fa tsy maintsy mbola ho tohizany izany. Ny tenin’Andriamanitra ao amin’ny Lioka 6 :22-23 manao hoe : « Sambatra hianareo raha halan’ny olona ka ariany sy haratsiany, ary laviny toy ny zava-dratsy ny anaranareo, noho ny amin’ny zanak’olona. Mifalia hianareo amin’izany andro izany, ka mibitaha fa indro : lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra ; fa izany no nataon’ny razany tamin’ireo mpaminany ». Fa manoloana ireny fihetsika mahamenatra nataon’ny HVM ireny, hoy ihany ity mpandinika ity dia mampametra-panontaniana ihany hoe ; moa ve ny filoha Marc Ravalomanana na ireo mpomba azy nisy nanakotaba na nihantsy ady tamin’ny mpitondra ka hoe hosamborina ny tenany, kanefa ny HVM nanao ny fankalazana ny azy tany Toliara nialoha ny fetim-pirenena, izay namoahana didim-pitondrana fa tsy azo anaovana hetsika fidinana an-dalambe kanefa dia nandika izany izy ireo tany Toliara, kanefa tsy nosamborina na nosakana ?
Nambaran’ity mpandinika ity fa tsy araka ny sitrapon’Andriamanitra ny ataon’ny mpitondra ary heloka eo anatrehan’Andriamanitra sy ny malagasy izany, hoy hatrany ity mpandinika ity, satria hoy ny tenin’Andriamanitra ao amin’ny bokin’ny Levitikosy 19 :18 manao hoe : « Aza mamaly ratsy ny ratsy na manao lolom-po amin’izay iray firenena aminao, fa tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Izaho no Jehovah ». Araka izany tenin’ny tompo izany dia tsy misy hafa isika eto amin’ity Madagasikara ity fa iray ihay koa miangavy anao Andriamatoa filoha raha azo atao dia ny mifanatona sy mifampiresaka ary mifandamina ny TIM sy HVM mba hisian’ny firindrana sy ny fihavanana sy filaminana eto Madagasikara.
Tadidio tompoko fa ianao filoham-pirenena dia ray aman-drenin’ny Malagasy ka tokony ho fakan-tahaka ho an’ny maro; indrindra fa ianao dia nilokaloka fa handray an-tanana ny fampihavanana eto madagasikara ? Ka aoka tsy ho mpitari-bato vilam-bava ianao Andriamatoa filoha. Fehiny dia ny ny tenin’Andriamanitra ao amin’ny Matio 5: 25-26 manao hoe: “Mihavana faingana amin’ilay manana ady aminao, raha mbola miara-dia aminy hianao, fandrao ilay manana ady aminao hanolotra anao amin’ny mpitsara, ary ny mpitsara kosa hanolotra anao amin’ny mpamatotra ka hatao an-tranomaizina hianao. Lazaiko aminao marina tokoa; tsy ho afaka ao mihitsy ianao tsy ho afaka ao mihitsy ianao ambara am-pandohanao ny variraiventy farany indrindra”.
Galerie | Cet article, publié dans Non classé, est tagué Emmoreg, GTT, HVM, Jirama, Marc Ravalomanana, Ny Valosoa 13 Jolay, Paul Rabary, Rakotoamboa Jean Louis, SMM, TIM Ravalomanana. Ajoutez ce permalien à vos favoris.